Nhau - MAZANO OKUWEDZERA THERMOPLASTICS
Welding ndiyo nzira yekubatanidza huso hwepamusoro nekunyorova iwo nekupisa. Kana uchitema thermoplastics, chimwe chezvinhu zvakakosha ndicho chinhu chaicho. Kwenguva yakareba seyimbi yepurasitiki yave iripo vanhu vazhinji vachiri kusanzwisisa izvo zvakakosha, izvo zvakakosha kune chaiyo weld.
Iwo wekutanga mutemo wekutemesa thermoplastics ndeyekuti iwe unofanirwa kukwenya senge-epurasitiki kuita-epurasitiki. Kuti uwane yakasimba, inowirirana weld, zvinodikanwa kuti uve nechokwadi chekuti substrate yako uye yako tsvimbo yekunamatira yakafanana; semuenzaniso, polypropylene kune polypropylene, polyurethane kune polyurethane, kana polyethylene kune polyethylene.
Heano mamwe matipi ekushambidza mhando dzakasiyana dzemapurasitiki nematanho ekuona yakakodzera weld.
Polypropylene (PP) ndeimwe yeakareruka thermoplastics kuweld uye inoshandiswa kune akawanda akasiyana mafomu. PP ine yakanakisa makemikari kuramba, yakaderera yakatarwa giravhiti, yakakwira yakasimba simba uye ndiyo yakanyanyisa simension polyolefin. Zviratidzo zvinoratidzirwa zvinoshandisa PP ndezvokuisa midziyo, matangi, ductwork, etcher, fume hoods, scrubbers uye orthopedics.
Kuti iweld PP, iyo welder inoda kuiswa panenge 572 ° F / 300 ° C; kuona tembiricha yako kunoenderana nerudzi rwewelder yaunotenga uye kurudziro kubva kumugadziri. Paunenge uchishandisa thermoplastic welder ine 500 watt 120 volt yekupisa chinhu, iyo inodzora mweya inofanira kumisikidzwa kungangoita 5 psi uye iyo rheostat pa5. Nokuita matanho aya, iwe unofanirwa kuve uri padyo ne572 ° F / 300 ° C.
Imwe iri nyore nyore thermoplastic kune weld ndeye polyethylene (PE). Polyethylene inobata kusagadzikana, ine yakasarudzika abrasion kuramba, yakasimba tensile simba, inogadziriswa uye ine yakaderera mvura yekumwa. Zviratidzo zvakaoneswa zve PE mabhini uye liners, matangi, midziyo yerabhoritari, kucheka mabhodhi nemasiraidhi.
Mutemo unonyanya kukosha pamusoro pekushambidza polyethylene ndeyekuti iwe unogona kusungira pasi kusvika kumusoro asi kwete kumusoro kusvika pasi. Zvinoreva, iwe unogona weld yakaderera arambe achirema polyethylene (LDPE) Welding tsvimbo kune yakakwira density polyethylene (HDPE) jira asi kwete zvinopesana. Icho chikonzero kuve chiri nyore. Iyo yakakwira iyo hukobvu zvakanyanya kuomarara kuputsa izvo zvikamu kune weld. Kana izvo zvikamu zvisingakwanise kuputswa pasi pamwero wakaenzana saka hazvikwanise kujoina pamwe chete nemazvo. Zvimwe kunze kwekuita chokwadi chekuti kuwanda kwako kunoenderana, polyethylene ipurasitiki yakanaka nyore kuwelda. Kuti uwedzere LDPE unofanirwa kuve nechero tembiricha ingangoita 518 ° F / 270 ° C, iyo inogadziriswa yakaiswa panenge pa5-1 / 4 kusvika 5-1 / 2 uye iyo rheostat iri 5. Senge PP, HDPE inosungirirwa pa572 ° F / 300 ° C.
Matipi eWelds Akakodzera
Isati yasvitswa thermoplastics, pane mashoma matanho akareruka anoda kutorwa kuti uve nechokwadi cheyakakodzera weld. Chenesa nzvimbo dzese, kusanganisira tsvimbo yekutungidza, ine MEK kana solvent yakafanana. Gadzira iyo substrate yakakura zvakakwana kuti ugamuchire tsvimbo uye iyo yekucheka kumagumo kwetambo yekumonera kune iyo 45 ° kona. Kamwe iyo welder yashandura kune chaiyo tembiricha, iwe unofanirwa kugadzirira iyo substrate uye iyo yekutsvimbo tsvimbo. Nekushandisa otomatiki yekumhanyisa tip yakawanda yebasa rekugadzirira inoitirwa iwe.
Kubata chinowisa pamusoro peinchi pamusoro peiyo substrate, isa iyo yekunamatira tsvimbo mune iyo tip uye uifambise mune yekumusoro nekudzika inofamba katatu kana kana. Kuita izvi kunopisa tsvimbo yekutsvaira uchidziisa substrate. Chinoratidza kuti substrate yakagadzirira kusunganidzwa ndipo painotanga kuita fogging mhedzisiro - yakafanana nekuridza pachigirazi.
Uchishandisa yakasimba uye inowirirana kumanikidza, pusha pasi pabhuti yetip. Bhutsu inosundira tsvimbo yekumonera mukati meiyo substrate. Kana iwe ukasarudza kudaro, kana iyo simbi yekunamatira ikanamatira kune iyo substrate, iwe unogona kurega gobvu uye rinobva rangozvidhonza pachako kuburikidza.
Mazhinji thermoplastics ane jecha uye simba reiyo weld harizokanganisike kana riine jecha. Uchishandisa 60-grit sandpaper, jecha kubva pamusoro pechikamu cheye bhandi rekusungira, wobva washandira nzira yako kusvika ku360-grit wet sandpaper kuti uwane kupera kwakachena. Paunenge uchishanda ne polypropylene kana polyethylene, zvinokwanisika kudzoreredza nzvimbo yavo inopenya nekupisa zvishoma pamusoro peyero yakavhurika murazvo murazvo propane torch. (Ramba uchifunga kuti zvakajairika nzira dzekuchengetedza moto dzinofanira kuteverwa.) Kana matanho aya apera unofanirwa kuve neweld inotaridzika yakafanana nemufananidzo pazasi kuruboshwe.
Kuchengeta matipi ari pamusoro apa mupfungwa, kutemesa thermoplastics inogona kuve nzira iri nyore kudzidza. Maawa mashoma ekudzidzira kutenderera achapa iyo "yekunzwa" yekuchengetedza kurudyi kunyangwe kumanikidza pane tsvimbo yakananga pasi munzvimbo ye weld. Uye kuyedza pamhando dzakasiyana dzeplastiki kunobatsira kugona maitiro. Kune mamwe maitiro uye zviyero, bata wako wemuno mapurasitiki muparadzi.